छोरीलाई पतिके …. गरे – Gazabkonews
छोरीलाई पतिके …. गरे
दा ई,जोको नि ,उमा भर्खरै विबाह गरेकी छोरीलाई प,ति र सासुले गरे वि, भ त्स ह, *त्या, ज्वा ईले मा ,रे, को भन्दै आमा र बहिनी मीडीयामा, बुहारीलाई ससु राले सं ,वे द,न,शि ल अं, ग,मा छो ,ए,को भिडियो बन्यो भाइरल
हरेक बुधबार अर्थसँग सम्बन्धित पुस्तकको सारंश प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामीले स्टिभ एन्डेरसनद्वारा लिखित पुस्तक ‘द बेजोस लेटर्स’ को सारंश लिएर उपस्थित भएका छौँ।बिक्रीमा सबैभन्दा छिटो १०० बिलियन डलर पुग्ने कम्पनी हो एमेजन र उनीहरु आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर त्यो कोशेढुङ्गामा पुगेका होइनन्। एमेजनको विकासको ढोका खोल्ने चाबी थियो–जोखिम लिनु। तर, त्यो जोखिम, जानिबुझि, गणना गरिएको र रणनीतिक थियो र हो।
चर्चित वैज्ञानिक थोमस एडिसन भन्थे, ‘म असफल भएको होइन। मैले १० हजार त्यस्ता तरिकाहरु पत्ता लगाए, जसले कार्य गर्दैन। र एमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसले जहिले पनि प्रयोग र असफलतालाई विकास र सफलतासँग जोडेका छन्।तर, आफ्नो फाइदाको लागि कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन भने, ‘जोखिम लिनु’ महँगो (भयानक पनि) हुनसक्छ। भाग्यवश, बेजोरले हरेक व्यवसायीलाई उनले पछिल्लो २० वर्षदेखि हरेक वर्ष शेयरधनीहरुलाई लेखेको एक लेटर (चिठ्ठी) मार्फत एमेजन कसरी विकास भयो भन्ने नाक्सा प्रदान गरेको छ।
पहिलो पटक, प्रविधि र जोखिम विशेषज्ञ स्टिभ एन्डेरसनले यी चिठ्ठीहरुलाई केलाएर एमेजनलाई भव्य सफल बनाउने बेजोसले अनुशरण गरेका १४ वृद्धि सिद्धान्तहरुलाई बाहिर ल्याएको छ। अहिले व्यवसायी, नेता, सिईओ, कर्मचारी र म्यानेजसहरुले आफ्नो व्यवसायलाई बढाउनका लागि, अझ उत्पादनमूलक, चलायमान, र छिटो सफल बनाउनका लागि यी सिद्धान्तहरुको प्रयोग गर्न सक्छन्।
र मैले धेरै कारणहरुले पुस्तक रोजेँ। तर एउटा प्राथमिक कारण, र त्यो हो अन्य वर्गहरुमा भन्दा बुकस्पेसमा धेरै आइटमहरु थियो। विश्वभरमा विभिन्न भाषाहरुमा ३० मिलियन फरक फरक पुस्तकहरु छन्। त्यस्तै वर्गको दोस्रो प्रडक्ट थियो संगित।र जब तपाईसँग प्रडक्टहरुको ठूलो क्याटलग हुन्छ, तपाई अनलाइनमा त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ जुन अन्य तरिकाबाट बनाउन सक्नुहन्न। सबैभन्दा ठूलो भौतिक पुस्तकपसल र सबैभन्दा ठूलो पसलले १ लाख ७५ हजार शीर्षक समेट्न सक्छ। त्यति ठूलो निकै कम छ।’